Nezvedu - Shenzhen HUANET Technology CO., Ltd.
Shenzhen HUANET Technology CO., Ltd.ndiye mumwe wevanotungamira vagadziri veIP Networking zvigadzirwa muChina Iyo dzimbahwe rekambani iri muSenzhen uye mahofisi ebhizinesi akagadzwa mumaguta makuru pasirese. Nenzvimbo mbiri dzeR & D muSenzhen neShanghai, nehunyanzvi R & D injiniya timu yekuvandudza nekuvandudza tekinoroji yedu uye zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvedu zvakafukidza EPON / GPON ONU / ONT / OLT, CWDM / DWDM / OADM, SFP, Gigabit Ethernet haizoshandisi uye Network Security Zvigadzirwa.
HUANET yakagara ichingotarisa pane hunyanzvi uye budiriro inofambira mberi muIP tekinoroji munda, uye ichiita kuyedza kukuru kwekuenderana netekinoroji nyowani. Isu takaisa mari 15% yekambani yegore yekutengesa huwandu muR & D gore rega rega. Isu tinovavarira kufukidza zvese zvakakosha zvigadzirwa mu IP networking, IP chengetedzo uye IP manejimendi minda, uye pasi peiyi hwaro, tinogona kuvandudza chinotevera chizvarwa Internet Solution. Chizvarwa chitsva Internet Solution ichatarisa pane nyowani chizvarwa data centre mhinduro uye yakakosha network mhinduro, iyo ichazoshandiswa zvakanyanya munguva pfupi.
Isu tinosimbisa kuti kubudirira kwebhizinesi kunouya kubva mukubudirira kwevatengi, kutendeseka & kuvimbika, kuvhura & bhizinesi, hunyanzvi & mhando uye basa rechikwata. Inotungamirwa neaya akakosha maitiro, HUANET yakavamba uye yakaramba ichivandudza inonzwika yemhando manejimendi manejimendi uye bhizinesi tsika tsika. Tichaenderera mberi tichitarisa kumatekinoroji matsva muminda yedata centre, gore komputa, nharembozha yeInternet uye kutaurirana kutsva kuri kubuda, uye gara uchizvipira kuve mupepeti akatanhamara weiyo nyowani chizvarwa data data uye gore komputa mhinduro mune yeneti yekudyidzana indasitiri.
2002 Kukurukurirana Kunaka muShenzhen yakavambwa mumagetsi ekushambadzira zvigadzirwa, kutsvagisa nekusimudzira;
2003 yakava imwe yemakambani makumi mashanu eShenzhen ekutsigira yepamusorosoro mabhizinesi, kuwana rutsigiro rwakakosha kune Ministry of Science uye Technology Bureau yeShenzhen kakawanda;
2005 yakatanga Managed transceiver, OEO inodzokorora michina, uye inopa OEM kugadzira, OEM;
2006 yakaunza optical module dzakateerana; yakatanga 10G optical module dzakateerana;
2008 yakaparura huwandu hwakawanda hweWDM uye DWDM bhodhi bhodhi michina, uye inopa mhinduro dzakakodzera dzekufambisa;
Muna 2009 wekutanga kupa EPON ONU zvigadzirwa zveOEM;
Yakasimbiswa muna 2012, Shenzhen kugona fiber fiber optic hutachiwana michina Co, Ltd., inoshanda mukutengesa kwemidziyo mitatu yekutamba uye yekufambisa network michina, fiber optic module.
External Modulation Transmitter, Xfp Transceiver, Sfp C ++, Huawei Olt Mutengo, Huawei Qsfp +, Optical Fiber Module,